​नेरुडे लघुवित्तले ४४ प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाडौं । १२ करोड ५० लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी हुँदा गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड ३७ लाख रुपैंया खुद नाफा कमाएको नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले शेयरधनीलाई ४४ प्रतिशत बोनस शेयर..
​सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले ९ प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाडौं । गतवर्ष २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले फेरी ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । चुक्ता पूँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्ने..
सेन्ट्रल फाइनान्सको ३३ प्रतिसत बोनस सेयर साधारण सभाबाट पारित
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्सका लगानीकर्ताले ३३ प्रतिसत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । फाइनान्सको आज सम्पन्न भएको साधारण सभाले गतवर्षको नाफाबाट ३३ प्रतिसत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १।७४..
​नारायणी नेसनल फाइनान्सको शाखा गोंगबुमा
काठमाडौं । नारायणी नेसनल फाइनान्सले आफ्नो १४औं शाखा काठमाडौंस्थित गोंगबुमा विस्तार गरेको छ । शाखाको बुधबार संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले उद्घाटन गरे । संस्थाले २३ वर्षदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको..
​एनसिसी र कुमारी बैंकबीच मर्जर सम्झौता, इतिहास कै ठुलो मर्जर, पूजि ८ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । एनसिसी र कुमारी बैंकबीच बुधबार बेलुकी मर्जरको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । यस अघि नै एनसिसि बैंकले इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेशनल, एपेक्स डेभलपमेन्ट र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको समझदारी गरेको..
​मुक्तिनाथ बैंकको ३१ प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर साधारणसभाबाट पारित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको पोखरामा सम्पन्न नवौं वार्षिक साधारणसभाले प्रस्तावित बोनस सेयर पारित गरेको छ । बैंकले यसअघि ३१ प्रतिशत बोनस सेयर र १.६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव..
​मेरो माइक्रोफाइनान्सको साधारण शेयर माघ तेस्रो साता आउने
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले मंगलबार साधारण शेयर निष्काशनको अनुमती पाएको छ । धितो पत्र बोर्डले माइक्रो फाइनान्सलाई ६ लाख १२ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनको अनुमती दिएको हो..
​लुम्बिनीे बैंक र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरुलाई थप सुविधा प्रदान गर्दै लुम्बिनीे बैंकले सहज र छरितो रुपमा जीवन बिमा उपभोग गर्न सक्नेगरी सेवा दिने भएको छ। लुम्बिनीे बैंक र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स..
​माछापुच्छ्रे र जनता बैंकलार्इ राष्ट्र बैंकले मर्जरको अनुमति दियो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंक माछापुच्छ्रे र जनता बैंकलाई एक आपसमा गाभिन सैद्दान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यी दुई..
बैकर सभासदले बैंकका अध्यक्ष र सिइओको कार्यकाल नतोक्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे
काठमाडौं । सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को कार्यकाल तोक्न नहुने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र..
मेगा बैंकको १० प्रतिशत बोनस सेयर साधारण सभाबाट पारित
काठमाडौं । मेगा बैंकले आफ्ना सेयरधनिलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ। बैंकको वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनश शेयर दिने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको हो। साथै बोनस शेयर वापत..
​ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच अन्तर बैंक बिद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लि र नेपाल क्लियरिङ हाउस लि बीच अन्तर बैंक बिद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट तर्फबाट प्रमुख..
प्युठानको बाग्डुलामा आईएमई रेमिटेन्स कम्पनीको १४०औं सेन्टर
काठमाडौं । आईएमई रेमिटेन्स कम्पनीले आफ्नो १४० औं आईएमइ सेन्टर प्युठानस्थित बाग्डुलामा स्थापना गरेको छ । कम्पनीका प्रवन्धक एवं सेल्स तथा नेटवर्क प्रमुख रुद्र राज पौडेलले इन्टरफेस मनी ट्रान्सफरकोे नाममा..
एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो 'सरल व्यवसाय कर्जा'
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले हालै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गरि सरल व्यवसाय कर्जा नामको नयाँ कर्जा योजना ल्याएको छ । सो कर्जा बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई सजिलै..
​सहयोगी विकास बैंक र जानकी फाइनान्स गाभिदै
जनकपुरधाम । सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसँग गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बैंकको १२औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित समारोहमा आज सो जानकारी दिइएको हो । नेपाल राष्ट्र..
​तोडियो महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बीचको मर्जर
काठमाडौं । महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक बीच भएको मर्जर सम्झौता तोडिएको छ । दुई कम्पनी मिलेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी हुने गरी गत साउन ३१ गते मर्जरको सम्झौता..
​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माग्यो सिइओ
काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माग गरेको छ । गत साता आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरागरी कृष्णप्रसाद शर्मा अवकास भएपछि बैंक सञ्चालक..
​अल्पाइन बैंकको २३ प्रतिशत वोनस सेयर दिने
काठमाडौं । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले २३ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले कर प्रयोजनका लागि १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको छ..
सिटी एक्सप्रेस र सनराइज बैंकबीच रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र सनराइज बैंकबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि विदेशबाट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत पठाएको पैसा सनराईज बैकका ५३ शाखा र एउटा..
​कोरियाका नेपालीले पैसा ग्लोबल आईएमईको खातामा पठाउन सक्ने
काठमाडौं । कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले अब इण्डष्ट्रियल बैंक अफ कोरियाले प्रदान गर्दै आईरहेको स्मार्ट बैंकिङ र एटीएमबाट आफ्नो वा आफन्तको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खातामा सिधै पैसा पठाउन सक्ने..
​सनराइज र सिटी एक्सप्रेसबिच रेमीट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र सिटी एक्सप्रेस मनि बिच रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार सिटी एक्सप्रेस मार्फत विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पठाएको रेमिट्यान्स सनराइज..
​एनसीसी बैंकको १६ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव, बोनस र मर्जर पछि चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३५ करोड
काठमाडौं । ​एनसीसी बैंकले १६ प्रतिशत बोनस शेयर बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार सम्पन्न बैंक सञ्चालक समितिको ५ सय १७ औं बैठकले शेयरधनीलाई बोनस शेयरको कर प्रायोजनका लागि..
​विजनेश युनिभर्सल सिद्धार्थमा गाभिने सम्झौता, नेप्सेमा कारोबार रोक्कियो
काठमाडौं । पुँजीपवृद्धि योजनामापछि परेको सिद्धार्थ बैंकले मर्जरका लागी विजनेश युनिर्भसल बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । फेवा विकास बैंकसँग मर्जरको सहमति गरेको विजनेश युनिर्भसल डेढ महिनामा सहमति टुटेपछि सिद्धार्थ बैंकसँग..
टुरिजम बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबिच विद्युतीय भुक्तानी सम्झौतामा
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस बिच अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा दिने विषयमा सम्झौता गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल र क्लियरिङ्ग..
​किन टुट्यो ? फेवा र बिजनेस युनिभर्सलको मर्जर
काठमाडौं । बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक र फेवा विकास बैंक एकआपसमा मर्ज नहुने निश्चित भएको छ । दुई संस्था मर्जरमा जान सहमति गरेको डेढ महिनापछि यी दुई बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट टाढीएका..
​नेपाल बैंकले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बेच्यो चार रोपनी जग्गा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो मिनभवनमा रहेको चार रोपनी जग्गा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बेचेको छ । बैंकको मीनभवनमा रहेको चार रोपनी जग्गा पुनर्बीमा कम्पनीले ३६ करोड रुपैयाँमा किनेको बताएको..
क्षेत्रीय स्तरको काँक्रेविहार विकास बैंककोे १५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव
काठमाडौं । काँक्रेविहार विकास बैंकले १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बिहीवार बसेको १ सय ६३औं बैठकले सो प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत..
​बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन
पोखरा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लक्ष्यका साथ वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्र गठन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र..
सिटिजन्स बैंकको ५५ प्रतिशत हकप्रद आउँदै, पूँजि ४ अर्ब ७७ करोड पुग्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले चुक्ता पूँजीको ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंया पुर्याउने क्रममा बैंकले प्रति १० कित्ता बराबर साढे ५..
​सानिमा बैंकको अनलाइनबाटै खाता खोल्ने सेवा सुरु
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सेवाग्राहीको सहजताका लागि अनलाइनबाटै बैंक खाता खोल्न सकिने सेवाको सुरुवात गरेको छ । सानिमा ई–खाता नाम दिइएको सेवा बाट देश बाहिर तथा भित्रका सेवाग्राहीले सहज रुपमा..
Results 1896: You are at page 46 of 64